Hey’adda Hormuud oo deeq lacageed gaarsiisay qaxooti Yeman u dhashay – Radio Muqdisho
Afar Boqol iyo Konton qof oo ah qoxooti Yemaniyiin ah oo ka soo cararay dagaalka dalkooda ka socda isla markaana ku nool caasimada Muqdisho ayaa maanta hey’ada samafalka ee Hormuud foundation waxay u qeybisay lacag, taasi oo qofkiiba la siinayay $100.
Munaasabada lacagaha lagu gudoonsiinayay qoxootiga Yemaniyiinta ah ayaa waxaa ka qeybgalay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, mas’uuliyiinta hey’adda iyo dadkii lacagaha loogu deeqay.
Gudoomiye ku xigeenka hey’adda Hormuud Sheekh Cumar Salaad ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in Lacagta ay ugu talagaleen dadka Yemaniyiinta ah ay uga gudbaan bisha barakeysan ee Ramadaan.
“Barnaamijkan quruxda badan ee maanta aan qabanay hadaa nahay Hormuud Telecom Foundation oo aan u qabanay dadka ka soo barakacay dalka Yemen ee hada ku sugan Muqdisho ,oo cadadkoodu yahay dadka aan maanta wax siinay 450 -500,qofkiiba waxaan siinay $100 oo aan ugu talagalnay inay uga gudbaan Ramadaanka inta ka harsan afur ka dhigtaan,ciida iyo arimhiisa uu qof kasta ku dhameystirto waxaa kaloo Jaaliyada Yemen aan u balanqaadnay inaa siineyno 450 kartoon oo Timir ah ,halkii kartoona ay ku jirto 8-kiilo”,ayuu yiri Cumar.
Qaar kamid ah dadkii Yemen u dhashay ee maanta hey’ada samafalka ee Hormuud ay Lacagta siisay ayaa warbaahinta qaranka uga waramay sida ay u arkaan lacagta la siiyay, isagoo u mahadceliyay hey’adda hormuud.
Ugu dambeyn Xildhibaan Ibraahim Saalax Deyfullah oo ka hadlay munaasabada lacagaha lagu siinayay dad Yemaniyiin ah oo ku nool Muqdisho ayaa u mahadceliyay hey’ada samafalka Hormuud, wuxuuna ugu baaqay hey’adaha kale in si lamid ah Hormuud ay ugu soo gurmadaan dadkan dhibaateysan.
“Runtii taakuleyntan waa taakuleyn aad u balaaran oo nuuceeda oo kale wali aysna helin,dadka maanta halkan leysugu keenay oo cadadkoodu gaarayo dad ku dhow 500,oo ay ugu talagaleen misaaniyad ah $50,000 oo dadka halkan fadhiya min $100 loo siinayo ,waa fursadii ugu horeysay ay helaan waxaan dareemayaa inay aad ugu faraxsan yihiin oo waxay ku soo beegantay waqti ay aad ugu baahnaayeen oo ay soo dhowdahay Ciida”, ayuu sheegay xildhibaanku.